musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » New Blossom Hotel Houston Inovhura Magonhi ayo
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Blossom Hotel Houston, chivakwa chitsva cheHouston, chiri kufara kuvhurika nhasi kune vashanyi uye neruzhinji. Iri pa7118 Bertner Avenue neNRG Stadium yakavakidzana, The Texas Medical Center nenzvimbo dzevaraidzo dzakakurumbira, hotera yemazuva ano inotarisira kusuma nharaunda yeHouston uye ruzhinji rwevanhu kune zvarwo zvepasi rose, kudya kwakanaka, uye nzvimbo dzakakwirira dzemisangano nezviitiko.
Hotera nyowani yeumbozha yeHouston inovhura nezvine raramo, dzimba dzevaenzi uye masutu, dziva repamusoro pedenga remba, uye zvirongwa zvepfungwa dzekudyira zvinotungamirwa nevabiki vaviri vane nyeredzi yeMichelin.
Ihotera inotangisa zvinopihwa zvenguva shoma munguva yezororo.
Blossom Hotel Houston yakapihwa mubairo weCOVID Hero mucherechedzo nerutsigiro rwayo munharaunda panguva yedenda uye dutu rechando.
"Kutevera nguva yekuedza kuguta redu nenyika mukati memwedzi gumi nemasere yapfuura, isu tiri Blossom Hotel Houston vanofara kuburitsa chivakwa ichi kune veruzhinji," akadaro Albert Ramirez, maneja mukuru weBlossom Hotel Houston. "Tinodada nekupa mikana yebasa kunharaunda uye kubatsira mukumutsiridza hupfumi hwenzvimbo nguva dzese tichipa vaenzi vedu kugara kwakanaka asi kwakagadzikana nebasa repamusoro uye zvinowanika."
Blossom Hotel Houston nguva pfupi yadarika yakapihwa mubairo weCOVID Hero neHouston's Asian Chamber of Commerce mucherechedzo nerutsigiro rwayo rwenharaunda panguva yedenda uye dutu rechando kutanga kwegore. Ihotera iri zvakare kufara kupihwa zita rekuti Official Hotel yeUSA Table Tennis timu. Pasi pechibvumirano ichi, mayunifomu eChikwata cheTenesi cheNational Table Tennis acharatidza chiratidzo cheBlossom Hotel Houston.
Blossom Hotel Houston iri kufara zvakare kuzivisa kudyidzana neHouston Astronomical Society kuita zviitiko zvinotarisa nyeredzi nekutanga seti kuitika neChina, Mbudzi 11 kubva 6:30 kusvika 8:30 pm Chiitiko che "Lunar Manheru", iyo yakavhurika kune vashanyi uye neruzhinji, ichaitika pamusoro pedenga redziva dhizaini yehotera ine zvinokatyamadza zveguta maonero uye isina kuvharika yekupinda denga rehusiku. Chiitiko chekudonha chinotanga nhevedzano nyowani mumabasa nesangano risingaite purofiti apo mari yakapihwa ichabatsira Houston Astronomical Society's nharaunda nharaunda nekuedza kwedzidzo.
Kubva panzvimbo yayo yepakati padyo neNRG Stadium, dunhu rinozivikanwa remumuseum, nzvimbo dzekutenga, dzekudyira uye dzevaraidzo, hotera nyowani inotambira vashanyi kuti vaone nzvimbo dzayo dzinonakidza dzakatenderedza pamwe nekunzwa kumutsiridzwa nekuzorodzwa panzvimbo ine zvinoyevedza, mutsa wepasi rose, uye zvakanaka. dining. Pamusoro pezvo, seyo chete hotera yemhando yepamusoro yakavakidzana nenzvimbo huru yezvokurapa pasi rose, hotera iyi inopa vaenzi ruzivo rwepamusoro pekugamuchira vaenzi panguva yekusangana kwakakosha uye maitiro.
Iyo hotera ine nhurikidzwa gumi nenhanhatu, iyo ichave yakakura kwazvo kuvhurwa kwekutanga kwa2022, inopa 267 dzimba dzakanaka dzevaenzi uye masutu uye anopfuura 9,000 masikweya mafiti enzvimbo dzinochinjika dzemisangano nenzvimbo dzezviitiko. Imba yepa-saiti, yemazuva ano yekusimbisa muviri yakashongedzwa nePeloton® inowanikwa kune vashanyi maawa makumi maviri nemana pazuva, pamwe nemitauro yakawanda concierge sevhisi iyo inosangana chero chikumbiro chemuenzi ine nhanho yebasa remunhu rinotarisirwa kubva akanakisa boutique mahotera. Ihotera zvakare ine dziva repamusoro pedenga remba uye imba yekutandarira ichizvikudza inotsvaira yedhorobha reHouston.
Dhizaini yakasarudzika yezvivakwa iyi inosanganisira yakanatswa, minimalist dhizaini ine mwedzi-yakafuridzirwa ruvara palette ine zvinoshamisa zvigadziriso zvemwenje, kuwanda kweCarrera marble, yakasarudzika tireyi sirin'i, pamhenderekedzo yehuni pasi uye yakasarudzika mameseji munzvimbo yese. Dzimba dzevaenzi uye masutu dzine nzvimbo dzekugara dzakakura dzine mwenje wakawanda uye dzakashongedzerwa neWi-Fi, yepamusoro-ye-mutsara Samsung Smart TVs, Dyson hairdryer, Nespresso coffeemakers, Digital Newspapers nePressReader®, uye dzimba dzekugezera dzemarble dzine. misoro yemvura yemvura uye yakasarudzika yeAqua Di Parma ™ zvinowanika kuti zvisangane uye zvipfuure zvinodikanwa zvebhizinesi, nhandaro uye vafambi vakatarisana nekurapa.
Ichizvikudza pamusoro pe9,000 square tsoka dzemisangano nenzvimbo yezviitiko, Blossom Hotel Houston ine yakawanda-inoshanda chiitiko nzvimbo nhanho yakatsaurirwa kumisangano yebhizinesi yeese akasiyana dzidziso nemaindasitiri pamwe nezviitiko zvemagariro. Iyo inoshamisa yeLuna Ballroom ine pasi kusvika kusirin'i mahwindo yakashongedzerwa neye-ye-iyo-iyo-inodhiyo yekudhirowa masimba ekugonesa nyore nyore misangano chaiyo uye makonferensi uye inogona kufadza vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu. Ihotera iyi inopa pfumbamwe dzimwe nzvimbo dzezviitiko dzine huwandu hwechiedza chechisikigo uye zvirongwa zvepasi zvinochinjika. Pamichato inosaina inogadzirwa nehunyanzvi hwekuita, Blossom Hotel Houston ine marongero ezviitiko zvakakosha zvevaviri.
Mukutanga kwa2022, Blossom Hotel Houston inoronga kupa vashanyi uye vagari venzvimbo mbiri dzakasiyana dzekudyira mukubatana nevaviri vane nyeredzi dzeMichelin. Imba iyi ichange iine imba yekutandarira inogamuchirwa inozoshanda mamenu ekubikira uye zvinwiwa anotariswa nevabiki, pamwe neimba yekudyira yevaenzi inopa mari yepasirese neyeAmerica. Tsanangudzo pamusoro pechirongwa chekugadzirira uye chef kuseri kweresitorendi zvichaziviswa munguva pfupi.
Blossom Hotel Houston iri pa7118 Bertner Avenue muHouston, Texas. Pamwe chete nekuvhurwa kwakapfava, hotera iri kuunza kushambadza kwezororo kubva zvino kusvika Zvita 31, 2021. Vaenzi vanogona kubhuka mapati emakambani epazororo uye zviitiko zvekudyira zvakavanzika kubva paUSD95 pamunhu zvichienda mberi. Kubhukidzwa kwemakamuri kunowanikwa kubva kuUSD289.00 zvichienda mberi kusanganisira yekupaka.
Kuti uwane kubhuka uye rumwe ruzivo nezve Blossom Hotel Houston, ndapota shanya BlossomHouston.com.
Blossom Hotel Houston inopa ruzivo rwekune dzimwe nyika rwakadzika midzi muSpace City. Ihotera iyi inoisa vashanyi nhanho chete kubva kuchipatara chikuru chepasi rose uye Houston mabhizinesi epamusoro-soro nenzvimbo dzevaraidzo, uye sehotera yepedyo yeumbozha kuNRG Stadium, iri zvakare maminetsi kubva kune inozivikanwa Houston. Zvingave zvekufambira zvinodiwa zvekurapa, bhizinesi kana mafaro, vashanyi vanogona kunakidzwa nekusiyana kweHouston, iyo inoratidzwa zvakare muhotera dzehotera kumidzi yeaerospace yeguta, vachitora mukana wekutenga kwekutengesa kwehotera, maresitorendi maviri ane chef, zvivakwa zvisingaenzaniswi. uye masevhisi, dzimba dzevaenzi dzeumbozha uye kuwanda kwezviitiko nenzvimbo dzekusangana. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya BlossomHouston.com, kana kuti tititevere Facebook uye Instagram.